Ndabere na mmekọrịta, ngwa ọhụrụ maka Mac nke ga-anọchi Google Drive na Foto | Esi m mac
Ndabere na mmekọrịta, ngwa ọhụrụ maka Mac nke ga-anọchi Google Drive na Foto
Google ekpebiela imekọrịta ọrụ igwe ojii ya abụọ dị maka Mac, n'otu ngwa. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-ejikwa ngwa abụọ dị iche iche. Na otu aka, mmekọrịta nke faịlụ na Google Drive na nke ọzọ foto na Foto. A na-atụ anya ka ụlọ ọrụ ahụ dochie ngwa Google Drive na ngwa ọhụrụ na njedebe nke ọnwa. Ruo ugbu a anyị maara aha ya na Bekee:Ndabere na mmekọrịta Ngwa, na isi ihe ọhụụ ga-abụ njikọta nke igwe ojii abụọ ahụ: mmekọrịta faịlụ na foto.
Na nkenke, ọ bụ ngwa ọhụrụ nke na-agbasawanye ohere dị ugbu a. Ihe Google choro bu iga n'ihu na mmekọrịta nke faịlụ na igwe oji. Ọ bụrụ na anyị chọrọ, site ugbu a gaa n’ihu anyị nwere ike ime nkwado ndabere anyị n’igwe ojii, iji nweta ya na kọmputa ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ngwa ọhụrụ ga-agụnye bulite foto na akpaghị aka na anyị nwere folda anyị họpụtara.
Anyị amaghị ọtụtụ nkọwa ruo ugbu a, mana ihe niile yiri ka ọ na-egosi na site na interface dị mfe ma dịkwa mfe, anyị nwere ike ịhọrọ folda ahụ ga-abụ akụkụ nke ndabere anyị. Ya mere, ọdịiche dị na nhọrọ ugbu a nke Google Drive nyere, bụ inwe ike ịlele ọnọdụ nke faịlụ 2 ọnwa gara aga, ma ọ bụ weghachite ya ma ọ bụrụ na anyị ehichapụ ya na ndudue. Google chọrọ ịkwaga na usoro ihe ọhụrụ a n'ụzọ ọhụụ. E debere June 28 dị ka ụbọchị mbụ iji gbanwee mgbanwe na akaụntụ.
Nke a nwere ike ịbụ nzaghachi Google maka nkwagharị Apple banyere mbelata ọnụahịa nke ọrụ iCloud na ngalaba kachasị elu, 2 TB, ewepụtara na WWDC ikpeazụ. Anyị ga-ahụkwu mmegharị na nke a na ndị a ma ọ bụ igwe ojii ndị ọzọ na-enye ọrụ na ọnwa ndị na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ndabere na mmekọrịta, ngwa ọhụrụ maka Mac nke ga-anọchi Google Drive na Foto
MacBook 12-inch adịghị arụ ọrụ na Ngosipụta Thunderbolt Apple
Foxconn na-ezube imeghe osisi na Wisconsin